June 22, 2019 - ThutaStar
ယောက်ျားဖြစ်သူအကောင့်ကို Add တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေးတွေကို သတိပေးစကားဆိုလာတဲ့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း ….
June 22, 2019 Thuta Star 0
စကားသံဝဲဝဲလေးနဲ့ ရယ်​လိုက်​ရင်​ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ သဉ္ဖာနွယ်ဝင်းကတော့ ချစ်ရတဲ့ခင်ပွန်းရယ်​ ချစ်​စရာ သားသား​လေးရယ်​နဲ့အတူ သာယာ​ပျော်​ရွှင်​တဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတာပါ။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ သဉ္ဇာနွယ်​ဝင်းက သူမရဲ့ခင်​ပွန်းသည်​ရဲ့အ​ကောင့်​ကို လာလာပြီး Add ကြတဲ့ ​မော်​ဒယ်​မ​လေး ​တွေရဲ့အ​ကြောင်းကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ သဉ္ဇာနွယ်​ဝင်းက​တော့ ခင်​ပွန်းရဲ့ အ​ကောင့့်ကိုလည်း သူမပဲကိုင်​တဲ့အ​ကြောင်း​ […]
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေနေကြပြီဖြစ်တဲ့ ဇင်သဲနိုင်တို့မိသားစု ဆွေးနွေးမှုကို Live လွှင့်ပြ…
သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်းနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဇင်သဲနိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အိမ်နှင့်ခြံကို ပေါင်နှံထားမှုကြောင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ တရားစွဲဆိုခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုရေးသားမှုကြောင့် ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ ဝေဖန်ထိုးနှက်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဇင်သဲနိုင်ရဲ့ ပို့စ်တင်ပြီးတုံ့ပြန်မှုကြောင့်လည်း ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေက ပိုမိုပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ […]
ယောက္ခမတွေကို အိမ်ခေါ်ပြီး ဒီပြသနာကြီး ဒီလိုကြီးဖြစ်တာ သမီးကပျော်ပါတယ်​လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဇင်သဲနိုင်
စစ်ကိုင်းမြို့မှာလည်း..အားကျမခံ .. Food Box လုပ်လိုက်ပြီ
မန္တလေးမြို့က အစပြုလိုက်တဲ့ Food Box ဟာ ခုဆိုရင် တခြားမြို့တွေမှာပါ လိုက်လုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ လှူဒါန်းမှု တခုပါ အရင်ကဆို Food Box ဆိုတာ နိုင်ငံခြားမှာပဲရှိတာပါ ခုလို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာတာ ဝမ်းသာစရာပါ တခြား မြို့များ နည်းတူ စစ်ကိုင်းမြို့က လည်း […]
ချစ်သူစုံတွဲတွေ အိပ်ရာဝင်ခါနီး မပျက်မကွက်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ အရာများ..
သင့်ဟာ သင့်ချစ်သူအပေါ် ဂရုစိုက်မှု၊နားလည်မှု၊နွေးထွေးမှုနဲ့ ချစ်ခင်ကြင်နာမှုတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်တွဲမှုက ပြည့်စုံခမ်းနားတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေ ဖြစ်စေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ gettingagood night sleep တခါတလေ မိမိပျက်ကွက်မှုကို စဉ်းစားမိရင် မိမိလွန်ရာကျမှန်းသိပါလိမ့်မယ်။သေချာတာတော့ သင်ဟာ အိပ်ရာဝင်ခါနီး ကောင်းသော ညပါလို့ စာတိုတကြောင်းပိုကတာ […]
ကရင်အမျိူးသမီးငယ်တစ်ဦး သြစတေးလျမှာ လေယာဉ်မယ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိ….
သြစတေးယျမှာ လေယာဉ်မယ် ဖြစ်တော့မည့် (၁၉)နှစ် အရွယ် ကရင်မလေး ရေဘက္ကာ ဂျော်နီ (Rebecca Johnny)။ လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ တစ်ခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပေမယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ ကရင်လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ ရှားပါးတဲ့ ဖြစ်စဉ် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါ တယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ်ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ လူမျိုးစုတွေထဲက […]
လက်ရှိနာမည်ကြီးနေတဲ့ တစ်ကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်မာမာအေး ပြောပြီ June 22, 2019 အနုပညာလောက မြန်မာသံ တေးသီချင်းများနဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို ခုအချိန်ထိ ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ မြန်မာသံ ဝါရင့် အဆိုတော်ကြီး ဒေါ် မာမာအေးဟာ ဆိုရင် သူမရဲ့ ပီပြင်ပြောင်မြောက်တဲ့ ဂီတ […]
“လက်ရှိသူမရဲ့ရည်းစားဟာ တစ်ချိန်ကသူမရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ အမည်မသိသွေးအလှူရှင် ဖြစ်မှန်းသိခဲ့ရ” ….
ဖူးစားကံကပဲ ဆန်းကြယ်တာလား၊ အရမ်းကို တိုက်ဆိုင်လွန်းတာလား မသိအောင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဖြစ်အပျက်တွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ များစွာရှိနေပါတယ်။ ယခုလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁နှစ်ကျော်ခန့်က သေဘေးကနေ ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ အမည်မသိသူတစ်ဦးက လက်ရှိမှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ထိုသူရဲ့ ရည်းစားဖြစ်မှန်းသိခဲ့ရပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်က Lin Xiaofen ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ […]
BREAKING NEWS မိခင်အား သားအရင်းဖြစ်သူက သတ်မှု ဘားအံမြို့တွင်ဖြစ်ပွား….
သားအရင်းဖြစ်သူက မိခင်အားသတ်မှု ဘားအံမြို့တွင်ဖြစ်ပွား ကြောက်ဖို့ကောင်းလာနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ…ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံလို့တောင် ပြောရမှာ ရှက်ဖို့ကောင်းနေပါပီ…. တစ်နေ့တစ်နေ့ လိုင်းပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင် မုဒိန်းမှု လူသတ်မှု စတဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေက တစ်နေ့တစ်ခြား များများလိုက်လာနေတယ်… ခုဆိုရင်ဗျာ ..ကိုယ့်ကို ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားပေးခဲ့တဲ့ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ မိခင်ရင်းကိုတောင် သတ်တယ်ဆိုတော့…ဘယ်လိုလူတေလဲဗျာ…. ဘယ်လိုအငြိုးတွေနဲ့များ သတ်ရဲ့တာလဲ ကိုယ့်အမေအရင်းကို…ကိုယ့်အမေရင်းကိုတောင် […]
သူဌေးလို သုံးဖြုန်းနေပြီး အကြွေးရှိတဲ့သူတွေကို ပန်ဆယ်လို ဒဲ့ပြောပြီ…
အကြွေးမရှိရင် သူဌေးတဲ့။ သိပ်မှန်တဲ့စကားလို့ပဲ ထင်တယ်။ အကြွေးရှိလျက်နဲ့ သူဌေးလိုနေတဲ့လူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါကကျ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းပါပဲ။ ငွေမရှိရင် အထင်သေးခံရတတ်တာ မှန်ပေမယ့် ငွေမရှိတာနဲ့ အထင်မသေးတတ်သူတွေ ရှိပါတယ်။ ငွေအတွက်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား စွန်းပေခဲ့တာ မရှိရင် အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်မသေးဘူးပေါ့။ ဘဝမှာ […]